CCW: "MW Farmaajo wali kama quusan muddo kororsi" - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/CCW: “MW Farmaajo wali kama quusan muddo kororsi”
CCW: “MW Farmaajo wali kama quusan muddo kororsi”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu wali ku howllanyahay Maddo kororsi.
Qoraal uu daabacay C/raxmaan ayuu ku yiri; ”
Villa Somalia iyo taliska nabadsugidda isbaarooyinka ay doorashada ku horgaynayaa waa kuwo is dabayaala, waase la fahamsanahay. Dalkaan doorasho malxiis iyo marag fur been ah ka socon mayso. Waqtiga iyagaa iska lumiyey, Soomaalina way ka tashan, dalkana halistooda waan ka badbaadsanaynaa Ilaaheey idinkii.”
Saraakiil Tigree ah oo lagu xiray gudaha Soomaaliya
Odayaashii dhisay Hirshabelle oo laga sagootiyay Jowhar
Ciidamo ka tirsan Haramcad oo ka degay Baladweyne